USB Flash Drive ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - တရုတ် USB Flash Drive စက်ရုံ
Premium Power Bank ပါ
Wireless Power Bank ပါ
အားသွင်းမြန်သော Power Bank
Wireless Charger လက်ဆောင်များ
Bamboo & Wooden Wireless Charger ပါ
USB Flash Drive ပါ
USB Flash Drive ကိုလှည့်ပါ
Bamboo & Wood USB Drive ပါ
စိတ်ကြိုက် PVC USB flash drive
PS5 Controller အားသွင်းစခန်း
Nintendo Switch အတွက် JoyCon
သံလိုက် 10000mah PD22.5W Q ...
1. သံလိုက် 10000mah PD22.5W Qi15W Fast Charging Power Bank ရောင်းအားအမှတ်များ① LED4လုံးသည် 25% စွမ်းရည်အတွက်တစ်ခုစီကိုဘက်ထရီအခြေအနေကိုညွှန်ပြသည်။ W 15W ဝါယာကြိုးများ ...
15W Magsafe3in 1 Wireless ...
1. 15W Magsafe3in 1 Wireless Fast Charging Bracket ရောင်းရမှတ်များ: ပေါင် ၃ ဝဝ ...
Dual 10W Bamboo & Wood ...
1. Dual 10W Bamboo & Wooden Quick Wireless Charger အရောင်းရဆုံးအချက်များ①စိမ်းလန်းစိုပြေရေးနှင့်အညီ Eco-friendly wireless charging pad ....
စုပ်ခွက် 15W အမြန်မိုဘိုင်း ...
1. စုပ်ခွက် 15W အမြန်မိုဘိုင်းလ်ကြိုးမဲ့အားသွင်းစက်ရောင်းရငွေ: cable စုပ်ခွက်နှင့်အတူ 15w အမြန်အားသွင်းကြိုးမဲ့တပ်ဆင်ထားသည်။ ②လိုဂိုအမှတ်တံဆိပ် ...
Built-in Cable Credit Card ...
1. Built-in Cable Credit Card 10W လက်ဆောင်အမြန်ကြိုးမဲ့အားသွင်းလက်ဆောင်များအရောင်းရဆုံးအချက်များ①ဖုန်းအတွက်ဖုန်းအတွက် 10W ultra- ပါးလွှာသော credit card အရောင်းမြှင့်တင် Wireless wireless charger 10W ...
Wood Bamboo Credit Card USB Flash Drive
စွမ်းဆောင်ရည်: 64MB ~ 128GB
USB interface ပါ ၀ င်သောမည်သည့် device များအတွက်မဆို Bamboo & Wood သည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်ဖက်ညီသော USB drive
Bamboo Wood Swivel Eco Friendly USB Flash Drive ဖြစ်သည်
Soft Rubber PVC စိတ်ကြိုက် USB Memory Stick
မင်းဆန္ဒရှိသရွေ့မင်းစိတ်ကူးတွေကိုအမှန်တကယ်ဖြစ်လာဖို့ကုန်ကျစရိတ်သက်သာတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကငါတို့ကိုပြောပါ၊ ဒါမှမဟုတ်ငါတို့ကိုဓာတ်ပုံတစ်ပုံပေးပါ၊ ငါတို့ကမင်းအတွက် ၄၈ နာရီအတွင်း 3D အနုပညာလက်ရာတွေကိုဖန်တီးပေးလိမ့်မယ်။
ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်ပရိုမိုးရှင်းအတွက်အခမဲ့စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော soft PVC USB drive အရောင်များ၊ ပုံစံမျိုးစုံ၊ အရွယ်အစားအားလုံးကို customer များမထုတ်လုပ်မီသတ်မှတ်ထားသည်။
စိတ်ကြိုက် PVC ကာတွန်းပုံသဏ္USBာန် USB Flash Drive
သင်လိုချင်သလောက်ရွေးချယ်မှုအမျိုးမျိုး၊ လူများစွာသည်ယာဉ်၊ သင်္ဘောများ၊ လေယာဉ်များ၊ တိရိစ္ဆာန်များနှင့်မီးသီးများ၊ ဖိနပ်များနှင့်အစားအစာများကဲ့သို့သာမန်နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းများကိုပင်ပြုလုပ်ရန်ရွေးချယ်ကြသည်။
4 in 1 Micro USB Lightning Type C OTG USB Flash Drive ဖြစ်သည်
micro USB type C နှင့် lightning adapter ပါသော OTG4in 1 memory stick, ဖိုင်များကို USB flash drive ထဲသို့ preload လုပ်ပြီးမဖျက်ဘဲ icon နှင့်တံဆိပ်ပြောင်းနိုင်သည်။
Auto-Run: JPG, mp3, video, website စသည်တို့သည် USB drive ကိုကွန်ပျူတာ (သို့) အခြားကိရိယာများသို့ပလပ်ထိုးသောအခါသင်၏အချက်အလက်များကိုကာကွယ်ရန် encryption ကိုပံ့ပိုးသည်၊ စကားဝှက်ကိုအသုံးပြုသူကပြုပြင်နိုင်သည်။
စိတ်ကြိုက်ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်စီးပွားရေးမြှင့်တင်ရေးအတွက် clip ပုံစံရောင်စုံ LED မီးပွိုင့်လိုဂိုဒီဇိုင်း
မည်သည့်ဆော့ဝဲကိုမှထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ၊ USB interface ဖြင့်ကိရိယာများထဲသို့ USB flash drive ကိုထည့်ပါ။
OTG3in 1 Lightning Type C Swivel USB Flash Drive ဖြစ်သည်
USB OTG (On-The-Go) သည် OTG လုပ်ဆောင်ချက်ပါ ၀ င်သောစမတ်ဖုန်းများနှင့်တက်ဘလက်များအားလုံးနှင့်လိုက်ဖက်သော၊ မည်သည့်ဆော့ဝဲကိုမှထည့်သွင်းရန်မလိုပါ၊ OTG သုံးနိုင်သောစမတ်ဖုန်းများ၊ တက်ဘလက်များနှင့်ကွန်ပျူတာများအကြား data များကိုလွယ်ကူစွာလွှဲပြောင်းခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်သည်အိမ်ရှင်စက်ပေါ်မူတည်သည်။
Android, Windows, Mac OS, IOS နှင့် Linux ၏ operating system ကိုထောက်ပံ့သည်။
ဆုံလည် LED Emitting Logo UDP Memory Stick
စိတ်ကြိုက်ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်အပြည့်ရှိသော UDP ဆုံလည်လက်မ drive LED LED ထုတ်လွှင့်လိုဂိုဒီဇိုင်း
မည်သည့်ဆော့ဝဲကိုမှထည့်သွင်းရန်မလို၊ အချက်အလက်လွှဲပြောင်းရန်၊ သိုလှောင်ရန်နှင့်သိုလှောင်ရန် USB interface ပါ ၀ င်သောကိရိယာများထဲသို့ USB flash drive ကိုထည့်ပါ။
Silicone Lanyard နှင့် LED Emitting Logo USB Drive
မည်သည့်ဆော့ဝဲကိုမှထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ၊ ဒေတာများကိုရယူရန်သို့မဟုတ်သိုလှောင်ရန်သင်၏ laptop သို့မဟုတ် desktop သို့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းတပ်ပါ။
စိတ်ကြိုက်သီးသန့်တံဆိပ်တံဆိပ်အရောင်းမြှင့်တင်ရန်အတွက်စတိုင်ကျလှပသောအရောင်အသွေးစုံ LED လိုဂိုဒီဇိုင်းသည်သော့ကဲ့သို့အရွယ်အစား
USB 3.0 USB2.0 နှင့်သဟဇာတဖြစ်၊ Plug and play၊ Win98/ME/2000/XP/Vista/win7/win8/win10 Mac OS 9.X/Linux2.4 နှင့်အထက်တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Buckle ပါသော Light Up Logo Slim Metal USB Drive
စိတ်တိုင်းကျကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအတွက်စတိုင်ကျသောသတ္တုမျိုးစုံအရောင်များ LED ထုတ်လွှင့်လိုဂိုဒီဇိုင်း
Light Up အမှတ်တံဆိပ် Slim Metal USB Flash Drive
စိတ်တိုင်းကျကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအတွက်ရောင်စုံ LED လိုဂိုဒီဇိုင်းကိုစတိုင်ကျစေပါသည်။
Wired fast charging သည် watt တစ်ရာခေတ်သို့ ဦး တည်နေပြီး protocol compatibility သည် p အထိတိုးတက်လာသည်။